काठमाडौँ । पछिल्लो २४ घन्टामा देशभर १ हजार ४८६ जनामा कोरोनााभाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घन्टामा १६ हजार ५३९ नमुना परीक्षण गर्दा १ हजार ४८६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो । १२ हजार ५३२ जनाको पीसीआर नमुना परीक्षण गर्दा १ सय १४९ जनामा र ४ हजार ७ जनाको एन्टिजेन नमुना...
काठमाडौं । बागमती प्रदेशमा हालसम्म १८ लाख ४८ हजार ५८८ जनाले कोरोना भाइरस सङ्क्रमण विरुद्धको पूर्ण खोप लगाएका छन् । बागमतीमा १८ वर्ष उमेर माथिका ३२ प्रतिशत नागरिकले पूर्ण खोप लगाएको प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेशमा खोपको पहिलो मात्रा लगाएका नागरिकको सङ्ख्या छ लाख १५ हजार ६६६ अर्थात् १४ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशमा १८ वर्षभन्दा...
काठमाडौं । भारतमा पाँचौ दिन लगातार दैनिक ४० हजारभन्दा बढी कोरोना संक्रमितको पहिचान भएको छ। पछिल्लो २४ घण्टामा भारतचर ४२ हजार ९०९ जनामा संक्रमण देखिएको छ। यी मध्ये २९ हजार ८२६ जना संक्रमित केरलामा पहिचान भएका हुन्। यस्तै, ३४ हजार ७६३ जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल भारतभर सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या ३ लाख ७६ हजार ३२४ पुगेको छ।...
काठमाडौ ।पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल दुई महिना लामो उपचारपछि सोमबार स्वदेश फर्किदैछन् । सफल मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि उनी झन्डै साढे २ महिनापछि स्वदेश फर्किन लागेका हुन् । मिर्गौलामा समस्या देखिएपछि उनी गत असार २ गते उपचारका लागि दिल्ली गएका थिए । स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार आएपछि उनी भोलि दिउँसो नेपाल आउने भएका हुन् ।थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालमा भर्ना गरिएका खनाललाई थप उपचारका लागि...
काठमाडौं । कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र ९सीसीएमसी०ले गत जुलाई महिनामा नेपालमा पुष्टि भएका कूल संक्रमितमध्ये ८० प्रतिशत डेल्टा भेरियन्ट भेटिएको जनाएको छ । सीसीएमसीले जारी गरेको सूचनामा डेल्टा संक्रमण पुष्टि भएकामध्ये ९७ प्रतिशतले खोप नलगाएको पाइएको समेत उल्लेख छ ।साथै, अन्य उमेर समूहमा भन्दा युवामा डेल्टा संक्रमण चाँडो हुने पाइएको समेत जनाइएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन ९डब्लूएचओ०ले डेल्टालाई...
इलाम । इलाम जिल्लामा ५४ हजार ९ सय ३६ जनाले कोभिडविरुद्धको खोप लगाएका छन् । २३ हजार ६ सय ४३ जनाले खोपको पहिलो मात्रा मात्र लगाएको इलाम स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्यांक छ । २ लाख ३५ हजार ३ सय १८ जना नागरिक अझै खोपको प्रतक्षिामा रहेका छन् । जिल्लामा २ लाख ९० हजार २ ५४ जनसंख्या छ । अहिलेसम्म खोपको...
तनाव एउटा यस्तो स्वास्थ्य समस्या हो, जसले ठीक कामलाई पनि बिगार्न सक्छ । तपाईंले पनि यो महसुस धेरैले गर्ने गर्छन् । त्यस्तो अवस्थामा जिन्दगीलाई समस्याबाट मुक्त बनाउनको लागि के गर्न सकिन्छ त ? यसको लागि केही उपायहरु हुन्छन्, जसले दिमागलाई तनावमुक्त गराएर खुला दिमागबाट सबै काम सफल गराउन मद्धत गर्छ । तनावको कारण पत्ता लगाउनुहोस् जब तपाईं तनावमा हुनुहुन्छ...
दुःखको मूल कारण के हो ?
एकादेशमा एक राजा थिए । उनलाई रोग लाग्यो । धेरै वैद्य–चिकित्सकलाई देखाए । तर, कसैले उनको रोग निको पार्न सकेनन् । यस्तैमा एक वैद्यले सल्लाह दिए, ‘राजालाई त्यस्तै वातावरणमा निको हुन्छ, जहाँ हरियो नै हरियो होस् । राजाले देख्ने सबै कुरा हरियो हुनुपर्छ ।’ राजाले आफ्नो आसपासका सबैकुरा हरियो बनाउन लगाए । कपडा हरियो लगाउन थाले । उनले प्रयोग...
विश्वमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ४२ लाख नाघ्यो
काठमाडौं – विश्वमा पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोनाबाट थप ९ हजार आठ सय ९९ जनाको मृत्यु भएको छ । यो सँगै विश्वमा कोरोना संक्रमणका कारण हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या ४२ लाख २ हजार ६५४ जनाको मृत्यु भएको छ । वल्डोमिटर्सका अनुसार कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सबैभन्दा ठूलो संख्या अमेरिकामा ६ लाख २८ हजार ९२ जना छ । दोस्रो ठूलो संख्या...
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका डाक्टरमथि आक्रमण, प्रहरीमा उजुरी
काठमाडौं । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका डा सुवास पन्त माथि आक्रमण भएपछि चिकित्सकहरुले प्रहरीमा उजुरी दिएका छन्।ड्युटमै रहेको बेला चिकित्सक माथि आक्रमण भएपछि उनीहरुले महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जमा उजुरी दर्ता गरेका हुन्। बिहीबार दिउसो आकस्मिक कक्षमा ड्युटीमै रहेका बेला डा पन्त माथि बिरामीका आफन्तले भौतिक आक्रमण गरेका थिए। बिहीबार दिउँसो ३ बजे ९० वर्षीय एक पुरुषलाई उपचारका लागि आकस्मिक कक्षमा...
123 … 27 Newer >>